Quo vadis, Domine? ဘယ်သွားမလို့လဲ၊ အရှင်ဘုရား။ | Radio Veritas Asia
Quo vadis, Domine? ဘယ်သွားမလို့လဲ၊ အရှင်ဘုရား။
အေဒီ ၆၄ ခုနှစ်၊ ရောမမြို့တော်ကြီးမှာ မီးလောင်မှု့ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရာ နေရိုးအင်ပါယာမင်းသည် အများပြည်သူများမှ ၎င်းအားပြစ်တင်စွပ်စွဲကြရာ ထိုချိန်ကာလရှိ အနည်းစုသော ရိုးသားရိုးရှင်းသည့် ခရစ်ယာန်များကို စွပ်စွဲပြီး ကြူပင်ခုပ် ကြူမြစ်ပါ မကျန်ရှင်းပစ်ရန် စတင်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ပါတော့တယ်။ ခရစ်ယာန်ဆိုလျှင်ပင် သေမိန့်က တပါတည်းတွဲထားသလိုပင် ၎င်းအင်ပါယာမင်း၏စစ်သည်များဟာ ခရစ်ယာန်များကို နေရာအနှံရှာဖွေ သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါတော့တယ်။
ထိုအချိန်မှာပဲ အသင်းတော်ကြီး၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခရစ်တော်ရွေးချယ်ခဲ့သော သံပေတရူးသည်လည်း အကြောက်တရားတို့လွှမ်းမိုးခံရကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပါတော့တယ်။ ဤသို့ဖြင့် ရောမမြို့မှ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစား၍ ထွက်ပြေးရာ ရောမမြို့အပြင်စပ် (မြေအောက်သင်္ချိုင်းများနှင့် မနီးမဝေးတွင်) ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးသော အရှင်ခရစ်တော်ဘုရားနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။
ယေဇူးခရစ်တော်၏ပုခုံးပေါ်တွင် ကားတိုင်အလွတ်တစ်ခုကို ထမ်းလာပြီး ရောမဘက်ကို ဦးတည်လာနေသည်ကို သံပေတရူးမြင်တွေ့ရသော်အခါ အလွန်ပင် အံ့အားသင့်ကာ ရောမမြို့တော်မှာ ဒီလောက် ရက်ရက်စက်စက် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေတာ "Quo vadis, Domine?" အရှင်ဘုရားက အဘယ်သို့ကြွချီတော်မူမလို့လဲ၊ ဟု မေးမြန်းပါတော့တယ်။ ထိုအခါ ခရစ်တော်ရှင်က၊ "Romam eo iterum crucifigi" နောက်တကြိမ် ကားတိုင်တင်ခံရဖို့ ရောမမြို့သို့ သွားမလို့၊ ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီလိုဖြင့် သံပေတရူးလည်း နောင်တကြီးစွာရပြီး ငါဟာ နောက်တကြိမ် ကိုယ်တော့်ကို ငြင်းမိသွားပြန်ပြီလားဟု အသိတရားပြန်၀င်ကာ ရောမမြို့မှ ထွက်မပြေးတော့ဘဲ ရောမမြို့ထဲသို့ပြန်၀င်ကာ မိမိကိုယ်ကို ခရစ်ယာန်များ၏သိုးထိန်းဟု ဆိုကာ အဖမ်းခံ၊ အသတ်ခံခဲ့ပါတော့တယ်။ သူသည် ရောမအင်ပါယာ နိုင်ငံသားမဟုတ်သည့်အတွက် ကားတိုင်တင်ခံဖို့ အပြစ်ပေးကြရာ ဆရာသခင် ခရစ်တော်အတိုင်း ပုံစံတူ ကားတိုင်တင်ခံဖို့ မထိုက်တန်သည့်အတွက် သူ့အား ကားတိုင်တင်သောအခါ ဇောက်ထိုးတင်ကြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။ -------------------------------------------------------------------------- သံပေတရူးမှ ခရစ်တော်သခင်ကို တွေ့ခဲ့သော ထိုနေရာတွင် ယနေ့ ဘုရားကျောင်းငယ်လေးတစ်ခု ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းငယ်လေးကိုလည်း Quo Vadis (ဘယ်သွားမလို့လဲ)ဟု အမည်ပေးထားပါတယ်။ ထိုဘုရားကျောင်းငယ်အတွင်းမှာ ယေဇူးခရစ်တော်၏ခြေရာတော်ဟု ယုံကြည်ရသော ခြေရာတစ်စုံကို ကျောက်ဖြာပေါ်တွင် တွေ့မြင်ဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်။